कोरोना संक्रमित २ पुरुषको कोभिड अस्पताल धरानमा मृत्यु - निष्पक्षखबर
विराटचोकः कोरोना संक्रमित २ जना पुरुषको कोभिड अस्पताल धरानमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका सह प्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठका अनुसार झापाका ५६ वर्षीय र धरानका ६५ वर्षीय संक्रमित पुरुषको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो ।
झापाका संक्रमित पु​रुषमा असोज २९ गते संक्रमण पुष्टि भएपछि असोज ३० गते कोभिड अस्पताल धरानमा भर्ना भएका थिए । उनको सोही दिन साँझ पौने ८ बजे ज्यान गएको हो ।
धरान– १५ का संक्रमित ६५ वर्षीय पुरुषलाई असोज २८ गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो । २९ गते कोभिड अस्पताल धरानमा भर्ना भएका उनको ३० गते साँझ सवा ७ बजे ज्यान गएको प्रवक्ता डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ७ लाख